Fifampiarahaban’ny andrimpanjakana : tsy nipoitra teny Iavoloha i Zafy sy Ratsiraka ary Rajoelina | NewsMada
Fifampiarahaban’ny andrimpanjakana : tsy nipoitra teny Iavoloha i Zafy sy Ratsiraka ary Rajoelina
Nanamarika ny lanonana teny Iavoloha, omaly ny fahabangan’ny sezan’ireo filoha teo aloha, ny Pr Zafy sy Ratsiraka ary Rajoelina. Samy nahazo fanasana avokoa anefa izy ireo. Samy eto an-toerana koa, eny Ivandry sy Faravohitra ihany anefa ny Profesora sy ny amiraly. Misy dikany ara-politika izany ? Voalaza fa hanana ny hambarany amin’izao fiandohan’ny taona izao ny eny Ivandry raha fanginana hafahafa kosa ny an’ny Deba.
Tsy eto an-toerena Rajoelina na nanambara tamin’ny tambajotram-pifandraisana aza ny 11 desambra teo, nanoloana ireo mpiara-dia aminy tamin’ny toerana iray fa ho avy ny faran’ny taona teo. Namaly ny fanasana anefa ny filoha teo aloha, Ravalomanana sy ny vadiny, ny ben’ny Tanàna Ravalomanana Lalao ary ny filoham-panjakana teo aloha, Ratsirahonana Norbert Lala.
Nahazo toromarika tsy ho eny ny Tim sy ny Mapar
Tsy tazana koa anefa ireo depiote Tim sy ny Mapar ankoatra ireo depiote mpanohana ny fitondrana. Nahazo toromariky ny mpitarika azy avokoa tsy ho avy eny ?
Na izany aza, tonga avokoa ireo filoham-piangonana: Ny Mgr Razanakolona Odon, ny mpitandrina Rasendrahasina Lala, ny Mgr Ranarivelo Samoela Jaona ary ny ho filohan’ny FFKM, ny pastora Rakoto Endor Modeste.
Anisan’ny lehiben’antoko sady mpikamban’ny Armada na ny vondrona Ambodivona niatrika izany ny Dr Robinson Jean-Louis. Fa teo koa ny Jly Camille Vital, amin’ny maha lehiben’ny andrimpanjakana azy teo aloha. Anisan’izany koa ny Jly isany sady efa Praiminisitra, Rabemananjara Charles sy Rakotoarijaona Desiré…
Nanoina ny fanasana ny iraisam-pirenena. Nitarika izany ny avy amin’ny Pnud, Fatma Samoura sy ny solontenan’i Etazonia, ny ambasadaoron’i Frantsa, Afrika Atsimo, ny avy any Vatikana, ny frantsay…
Fiomanana ny fandraisana ny Frankofonia sy ny Comesa
Niova ho taorian’ny lahatenin’ny filoham-pirenena vao natao ny fotoam-bavaka raha ny fanombohana ny fotoana, ialohavan’ny hiram-pirenena no fanaovana izany hatramin’izay.
Nanao fihetsika mirindra, nihazakazaka tao anaty efitrano, nitondra ny sainan’ireo firenen’ny Frankofonia sy ny Comesa kosa ireo mpianatry ny Lycée Andoharanofotsy. Hanehoana ny handraisantsika ireo fihaonana an-tampony roa ireo amin’ity taona ity.
Nanafana ny lanonana ireo tarika sy ny antoko mpihira samihafa. Nisahana ny sakafo rehetra kosa ny hotely iray lehibe etsy Antaninarenina.